घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू आइवरी कोस्ट फुटबल खेलाडीहरू Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको एक फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नाम उपनाम हो। 'फायरवाल'। हाम्रो यया टाइट्रे बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातासम्म पुग्नुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ। सुरु गरौं;
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक बचपन जीवन
Gnégnéri Yaya Touré मई 13, 1983, Bouaké कोटे d'Ivoire मा पिता श्री मारी टूर, एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी र किसान र आमा ((श्रीमती Toure को रूपमा भनिन्छ, एक किसान)। उनले आफ्नो अधिकांश बचपन एबिजान शहरमा बिताए।
ययाका लागि, बोकेमा नौ बच्चाहरु को दोस्रो को रूप मा बढ्दो, आइवरी कोस्ट को सजिलो थिएन। रिपोर्टहरूले संकेत गरेको छ कि उनी आफ्नो बचपनका धेरै वर्षका लागि प्रति दिन एक दिनको साथ बिताउँथे।
ययाय त्र्रेले आफ्नो बचपनका धेरै वर्ष बिताएर आफ्नो बुबाको कोलोमा अभिप्रायको रूपमा बिताएका थिए जसले ग्राहकहरूको लागि जूतालाई आफ्ना पिताको कम आय पूरै पुर्याए। जब फुटबल खेल्ने मौका पहिलो पटक कल गर्दै थियो, यो कोलो थियो जसले छोटो छोरो यया पछाडि छोड्यो।
Yaya Toure प्रारम्भिक जीवनको लागि
ययाले आफ्नो भाइले अवांछित फुटबलको लागि काम छोड्ने निर्णय गरेपछि छातीको छाती राखे। जूता छातीको अवलोकन गरेपछि उनलाई गरिबीबाट निकाल्न सकेन, तिनले छोड्ने निर्णय गरे। यो यो बिन्दु, उनले स्थानीय टोलीमा सामेल गर्ने निर्णय गरे। यया धेरै शुरुवातमा अझ आशावादी हुनुहुन्थ्यो। उनले फुटबललाई केहि चीज देखेका थिए जसले छिट्टै उनलाई गरिबीबाट हटाउन सक्छ।
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -एक बेवकूफ केटाको रूपमा फुटबल सुरु गर्दै
Yaya Toure प्रारम्भिक फुटबल दिन
जब ययाय त्रयले आफ्नो पहिलो फुटबल टोलीमा सहभागी भए, धेरैले उनलाई बोलाए 'लामो अन्तर्वार्ता'. तथ्याङ्कका आधारमा उनी एक गरीब घरबाट आए, त्यहाँ उनको बारेमा असाधारण कुरा थियो। यया हरेक पटक आफैलाई राखे। उनले खेल खेल गर्नुअघि फुटबल जूताहरू राख्न पर्खन सकेन। उनले सबैलाई भने, त्यो नराम्रो खुट्टा संग खेलिरहेको थियो ठीक थियो।
फुटबल जूताहरूको पहिलो जोडी अन्ततः 10 को उमेरमा आयो। दुर्लभ खुट्टाहरू प्रयोग गर्दा, धेरै दर्शकहरूले देखाएअनुसार उनी शुद्ध प्राकृतिक प्रतिभा थियो। पछिल्ला दिन, सडक फुटबल आइवरी कोस्ट मा वृद्धि भएको थियो। उनले मित्र र परिवारसँग एबिडानको सडकमा खेले। उनको ठूलो भाइ कोलो पहिले देखि नै उनको शहरको स्थानीय युवा समुह ASEC Mimosas को एक प्रमुख खेलाडी थियो।
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उहाँका कौशलहरूमा काम गर्दै
Yaya Toure - मास्टरिंग गेम
Toure तीन वर्ष को लागि आफ्नो 13 उमेर मा आइवायरियन साइड ASEC Mimosas युवा अकादमी मा शामिल होने देखि पहिले काम गरे। उनले लोकप्रिय क्लब मा रैंक्स मार्फत आफ्नो काम गरे जुन डियर जोजोरा, इमानउएल इबेउ, गुर्विनो र सलोमन कलूको उत्पादन गरेका थिए। टीमको जूनियर टोलीमा4वर्ष बिताउन पछि, यया टुयरेले जेनेरिक एक्स युनियनको उमेरमा आफ्नो वरिष्ठ पहिलो प्रतियोगिता गरे।
यस चरणमा, सफल हुन अझ बढी दृढता थियो। उनको विश्वास थियो कि उनको परिवार गरीबी मानिस बनाइयो र तिन र तिनको भाईलाई हटाउन सकिन्छ। उहाँले आफ्नो आत्मालाई आगो लगाउँछन् के खोजमा डरलाग्दो थियो। उनको लागि राम्रो छ, उनको प्रारम्भिक दृष्टान्त भुक्तान गरिएको छ। त्यही वर्षमा, यया त्रयले कोट डी'वोजियर प्रिमियर डिभिजन जितेर आफ्नो क्लबको नेतृत्व गरे। एकल दलले आफ्नो क्लबको विजय हासिल गरेपछि उनको नाम फुटबल स्काउट्सको बीचमा र उनको देशको सबैको ओठमा लोकप्रिय थियो।
ययाया ट्युरे, तपाइँ त्यतिबेला जवान वर्ष 2001 मा युरोपमा एक लोकप्रिय इभोरियन फुटबल आंदोलनको भाग थियो।
Yaya Toure युवा दिनहरू
तुरुन्तै, उहाँले विशेष धन्यवाद को लागि धन्यवाद Jean-Marc Guillou (माथिको सेतो मानिस) जसले 14 को एक विशेष बेल्जियम क्लबमा इभोरियन फुटबल खेलाडीको ठूलो आंदोलनको सुरुवात गरेर आफ्नो देशलाई मद्दत गर्यो, Beveren। उहाँ फुटबलरहरू मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो जुन युरोपमा ढिलो भयो उनीहरूको अन्य साथीहरूको 13 बीच। तिनको आगमनमा, आइवरी कोस्टका उनको बेभेरिन समूहले उनलाई एकदमै सुन्दर आश्चर्यकलापको रूपमा चाँडै राखेका थिए जुन एक पटक फुटबल जूताहरू थिएनन्।
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - शस्त्रागारको साथ परीक्षण
बेल्जियम साइड बेवरले सामेल भएपछि दुई वर्षपछि, एक्सएनएनएक्सएक्स-वर्ष-उमेर ट्युरेले आर्सेनलसँग परीक्षण गरे। कोलो उस समय त्यहाँ नै थियो। अर्जेन्टिना वेन्जरले उनको पछिल्ला क्लबको साथ आफ्नो पहिलो preseason खेलमा उनको प्रदर्शनमा भरोसा व्यक्त गरे।
त्यो समय अन्त भयो। यया ब्रेनेट विरुद्ध अनुकूल पूर्व-सत्रमा खेल्ने र राम्रो मौका पाएनन्। आर्सेन वेन्जरले आफ्नो प्रदर्शनको रूपमा वर्णन गरे 'पूर्णतया औसत' .
तथापि, शस्त्रागारले प्रयास गरे र उहाँलाई साईन ईन तर कार्य अनुमति प्राप्त गर्न असमर्थ भयो। दृढता संग ईंन्धन गरियो, त्र्रे ले फेरि यूक्रेनी क्लब मेटलुर डोनसेट्क मा शामिल हुन को लागी फैसला गरे जहां त्यो एक साल को लागि र ठूलो क्लबहरु देखि देख्न को लागी रु।
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -फुटबल यात्रा
बेल्जियम क्लबमा उनको समयमा उनले 70 पटक खेलेको र तीन गोल गरे। जस्तो भनिएको छ, तिनीहरु निराश भए पछि उनको सपनाहरु लाई आर्सेनल मा एक निराशा भयो। उनले आफ्नो दिमागलाई यूक्रेनी क्लब मेटलुरह डोनेट्स्कमा सामेल गर्न अघि समय लिन सकेनन भने उनी क्लबमा फुटबल थिए।
Yaya Toure को फुटबल यात्रा
ययाका लागि, मेटलुरह डोनेट्स्कको साथमा एक उत्तम योजना थियो। युक्रेनको टोलीमा उनको आचरण कस्तो थियो भन्ने कुरा सुरु भयो, एक ठूलो यूरोपीय फुटबल यात्रा। उनीहरूले मेटलुरह डोनेट्स्कमा एक वर्षको लागि र ठूलो क्लब द्वारा हेर्नुअघि आधा घण्टा बिताए।
यूक्रेनमा छोटो हिज्जे पछि ग्रीक साइड ओलम्पिककोकसले उनलाई मौका दिए। ययायाको विकासमा ययायाको विकासमा एक सतर्क आँखा राख्नु भएको छ, त्यसपछि ओलम्पियकोको प्रबन्धक ट्रन्डो सोलसीले 22 वर्षे उमेरमा हस्ताक्षर गर्न प्रसन्न भएको थियो जसले तुरुन्तै एक प्रशंसकलाई मनपर्ने बनायो। मिडफील्डमा रिलिडोडो संग स्थानित, ययालाई उत्कृष्ट बनाइयो किनभने टोली घरेलु डबलले जित्यो। एक चैंपियन्स लीग पहिलो - एक र्युलिभाडो हडताल को लागि एक सहायता कमाई - 2006 मा एक विश्व कप उपस्थिति पछि। 2006 विश्व कपमा, यया इवाट कोस्टको समूह चरण खेलमा तीनवटा राम्रा खेलाडी र राम्ररी खेल्नुभयो। यो जब उनी युरोपको सबैभन्दा ठूलो दलका रडारमा पूर्ण रूपमा समावेश भए।
चाँडै ओलम्पिककोस उनीहरूको जवान स्टारमा विशेष गरी आफ्नो 2006 विश्व कप प्रदर्शन पछि पकडने संघर्षमा थिए। यो मोनको थियो जसले सम्पर्क गरे र £ £ 5m को ट्रांसफर शुल्कको लागि यया हस्ताक्षर गरे - पहिले नै दोहोरो रकम हो कि ओलम्पिककाले उनको लागि मात्र 12 महिना पहिले भुक्तान गरेको थियो।
यो नभएसम्म नयाँ प्रबन्धक लरेन्ट बानाइड आइपुगेका थिए कि प्रशंसकको उत्तम यया टाइट्रे हेर्न।
उनीहरूले क्लबलाई रिजालेज क्षेत्रबाट टाढा राख्न महत्त्वपूर्ण थिए।
उनको प्रशिक्षक बानडेले भने: "ययाले अत्यन्तै प्रविधि प्राप्त गरेको छ र यसको शरीरको प्रभावलाई प्रभाव पार्न प्रयोग गर्दछ। उसले केहि पनि गर्न सक्छ। "
Yaya Toure: मोनाको मा कला मा मास्टर
एकपटक फेरि उहाँ एक सिजनको लागि बसिरहनुभयो र स्पेनमा ठूला कुरामा सारियो। यो समय स्पेनिश XIUMX मिलियन को लागि बार्सिलोना गायन बार्सिलोना। उनले पहिले Barca को लागि रक्षात्मक मिडफील्ड भूमिका खेले। केहि बिंदु मा, उनको हमला दौड सीमित भयो र सर्जियो Busquets द्वारा टीम को मजबूर गरे पछि। यसले उनलाई 6.7 चैंपियंस लीग फाइनल मा देखाएको जस्तो केन्द्रिय भूमिकाको रूपमा खेल्न सुरु गर्यो।
ययाया ट्युरे केन्द्रीय ब्याक भूमिका खेल्दै
केन्द्रीय ब्याक स्थिति खेल्न थकित भएपछि उनी इङ्गल्याण्ड गए। तपाईले तीन सीजनको लागि एफसी बार्सिलोनामा चल्नुभयो।
यसले म्यान्चेस्टर सिटी पाउन्ड 24 मिल्यो उनलाई साइन गर्न। वास्तवमा, कोही पनि तर्क गर्न सक्दैन कि त्यो हरेक पैसाको लायक छैन।
Yaya Toure शहर सुरू गर्नुहोस्
आफ्नो पहिलो सिजनमा, उसले एफए कपको लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो। ययाया मिडफील्ड दौड्यो र अर्का फाइनलमा खेलकुदको मात्र गोल बनाए। मैनचेस्टर युनाइटेड विरुद्ध खेलमा फाइनलमा गोल गरे। त्यो 35 वर्ष को लागि क्लब को पहिलो प्रमुख ट्राफी को सुरक्षित मा जिम्मेदार थियो।
ययाय त्रय पहिलो ट्राफिक मा मैनचेस्टर सिटी
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पैट्रिक वेरा संग समानता
यया टाइट्रे डब गरिएको थियो 'नयाँ पैट्रिक वेइरा' ग्रीस र फ्रान्समा उनको हिज्जेको समयमा। सायद, दुबै पार्टीहरूले विशाल भौतिक समानताहरू साझेदारी गर्छन्। पहिलो, यी मिडफिल्ड माछा मार्ने माझीले माथिको ठूलो शरीरको फ्रेम बनाउँछ। तिनीहरू टाढा दौड बनाउन मनपर्छ र क्षेत्रमा घाँसको हर ब्लेड लुकाउन सक्छन्। अन्तमा, रिपोर्टहरूले संकेत गर्दछ कि यी ठूला पुरुषहरूले आफ्नो लामो निचो लागेका शर्ट्सको दायाँ आकार जोडा खोज्न समस्या भएका थिए।
एक पीढी, पैट्रिक भिइरा र Yaya Toure आधुनिक दिन मिडफिल्डरको दुई आदर्श उदाहरणहरू छन्। गति, शक्ति, रचनात्मकताका बन्डलहरू र लक्ष्यको लागि असंगत आँखा। दुवै को सबै भन्दा मिडफिल्डर्स को रूप मा कभी पनि ईपीएल मा खेल्नुहोस को रूप मा देखिए।
यया ट्युरे र प्याट्रिक वेरा बीच समानता
धेरै वर्ष पहिले, यो कल्पना गर्न असम्भव थियो कि एक खेलाडी वििएराको रूपमा उही उचाई पुग्न सक्थ्यो, तर त्यसपछि केहि समय पछि एक असाधारण खेलाडी संग आउँछ जुन तपाईले उठाउनुहुन्छ र ध्यान दिनुहुन्छ। ययाय त्र्रे त्यो खेलाडी हो।
सायद तपाईंले थाहा पाउनुभएन; शर्ट नम्बर ट्युरे बार्सिलोनामा भएको थियो बप्तिस्मा नायकको सम्मानमा 'पैट्रिक विइरा'।
यया टाइट्रे शर्ट नम्बर - उनको केटाकेटी नायकको सम्मानमा (पैट्रिक वेरा)
उनले म्यान सिटीमा सामेल हुँदा अंकहरू गोल गरे, किनकी वेइरासँग पहिले नै 24 कमीज थियो!
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
यया त्रय र पत्नी, गिनाबा
उनको नाम गिनिबा हो र यो यया टूर को जीवनको प्रेम हो। टाउको एक विवाहित पुरुष हो र अहिले उनको विवाह भएको छ। उनको लेखन को लागी दुई बच्चाहरु छन्।
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -गुप्त प्रेम सम्बन्ध
ययाय त्रय एक पटक सूर्य अखबार द्वारा सिंक गरिएको छ, को रूप मा तटीय दावा को रूप मा विवाहित आइवरी कोस्ट मिडफिल्डर को उनको पत्नी, गिनाबा टूर को धोखा दे रही छ।
ययाय त्र्रेको स्पष्ट पतन पनि व्हाट्सप्प थियो, जस्तै सूर्यले म्यान सहरको तारा र एक ट्याबलोडमा एक अनुरक्षण सेवाको आरोपमा महिलाहरु को बीच सन्देशहरुको एक माना चेन प्रकाशित गर्दछ। भवदीय, व्हाट्सएप मा यया टाइट्रे नाम को रूप मा तब देखि प्रकट भएको थियो "Yaya42".
यता टाइट्रे गुप्त प्रेम सम्बन्धी ह्याट्स एप्समा
उपरोक्त सैंड्रा नटोनिया, एक मालवाई वेश्यालय हो जसले 2015 मा दाबी गरेको छ कि उनी यया त्रयसँग सम्बन्धको श्रृंखला थियो। उनले बताइन् कि उनले मिडफिल्डरको भाइ कोलोसँग लिभरपूलमा पनि सोधे। पछि ययाले दावी गरे कि उनको पत्नी गिनिबा टाउर छ र तिनलाई चाहिन्छ।
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -विश्वास द्वारा एक मुस्लिम
लाइभबगरले फुटबल वा कुनै अन्य खेलमा धर्म महत्त्वपूर्ण छैन भनेर जान्दछ (यसको प्रदर्शन भनेको कुरा हो), तर यो तथ्यलाई थाहा छैन कि यया त्रय विश्वासको आधारमा मुस्लिम हो।
यया त्रय - विश्वास द्वारा एक कोर मुसलमान
उहाँको साँचो इस्लामी विश्वासको प्रमाण देखाइएको छ। उदाहरणका लागि, यया ले आफ्नो धार्मिक मान्यता अनुसार लीग खेल पछि च्याम्पियन को अंग्रेजी परम्परालाई पराजित गर्यो।
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -आइवरी कोस्ट राष्ट्रपतिसँग सम्बन्ध
कोट डी इवोयर राष्ट्रपति अलास्सेन ओतुटा देखाइएको छ त्यो ययाय त्रय को एक ठूलो प्रशंसक हो। फुटबल प्रेमीको रूपमा, उनले एक पटक ययायालाई उनको पहिलो मोटरसाइकलमा आफ्नो पहिलो अफ्रिकी राष्ट्र कप विजय समारोहको दौडान दौड गर्न निम्तो दिए। उनीहरूको सम्बन्ध उनीहरूले फुटबलको वरिपरी घुमाउँदैनन्, तर व्यक्तिगत रूपमा धेरै तरिकामा।
आइयाओ कोस्ट राष्ट्रपति संग सम्बन्ध ययाया ट्युरे
आफ्नो केटा 'यया टोर्रे' गरेको के उत्साह को भावना अनमोल थियो। यो उत्साह बढेको राष्ट्रपति अलसेन ओटाटाले सोमबार सोमबार सोमबार घोषणा गरेको राष्ट्रिय छुट्टीको रूपमा। उहाँले सार्वजनिक रेडियो र टेलिभिजन स्टेशनहरूमा कामदारहरूलाई मोटो छुट्टी तिर्न घोषणा गर्नुभयो।
सार्वजनिक उत्सव पछि पछि राष्ट्रपति संग एक गृह मन्त्रालय पछि लागिएको थियो।
Yaya Toure विजय पार्टी
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -भाइ 'कोलो' संग सम्बन्ध
तपाईं पनि ठूलो हुनुहुन्छ, धनी र अधिक लोकप्रिय, ययाले सधैं आफ्नो ठूलो भाइ 'कोलो' लाई उनको पूर्ण आदर दिएका छन्। यो नोटमा उल्लेखनीय छ कि कोलो एक पटक आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको हेरचाह गर्दा उनीहरु दुवै जवान र गरीब थिए।
शुरुआत बाट, ययाय त्रयले आफ्नो प्रिय वरिष्ठ भाइको साथ खेल खेल्ने सपना देखेको छ। तपाईं आर्सेनलमा कोलोमा सामेल हुन उनको सपना निराशा मा समाप्त भयो जस्तै हाल नै प्रकट भयो। तपाईं, यया अझै पनि मन्चेस्टर सिटीको साथ अर्को अवसर पाउनुभयो।
भाइ 'कोलो' संग यया टाइट्रे सम्बन्ध
यो म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई पराजित गरिसकेपछि त्यहाँ पुगेको थियो र मैनचेस्टर सिटीबाट सिरेन सिग्रेसनको लागि पर्खाइरहेको थियो जहाँ उनको बुबा एकपटक लिभरपूलमा सामेल हुनुभन्दा पहिले खेलियो।
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -हङकङको प्रेमी
मन्चेस्टर सिटी मिडफिल्डर यया त्रय को एक शुभकामना वाला राजदूत नियुक्त गरिएको छ जसमा उनले चिंताओं को बिरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभियान मा शामिल हो।
आईभरी तट अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) अभियानमा सामेल भएको छ किनभने उनीहरूले हङकङको हत्या गर्न रोक्न खोज्दैछन् कि केवल 800 मात्र आफ्नो देशमा रहन्छन्।
यया टाइट्रे - हाइट्स को एक प्रेमी
टोरोले नैरोबीमा एक प्रेस सम्मेलनमा यसो भने:
युया टुयरे- संयुक्त राष्ट्रसंघका एक राजदूत
'पोषण अफ्रिकाका अस्तित्वको अस्तित्वलाई धम्की दिन्छ र यदि हामी अहिले काम गर्दैनौं, हामी भविष्यमा हेर्न सक्दछौं जसमा यस प्रतिमा प्रजाति बाहिर छानिएको छ।.
'आइवरी कोस्टको राष्ट्रिय टोलीले "यस हात्ती" नामका यी शानदार प्राणीहरू जुन शक्ति र अनुग्रहले भरिएको छ, त्यस पछि, त्यहाँ मेरो देशमा त्यहाँ 800 व्यक्तिहरू छोडिने केहि हुन सक्छ।'
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रबन्धकहरूसँग छुट
उनी एएस मोनोको प्रबन्धक, लजजलो बलोनीसँग घटेका थिए जब ययाले एनजीएनएक्समा फ्रान्सेली लिग्युन 1 साइड एएस मोनाकोको लागि खेल्न थाल्नुभयो। यो के भयो। बोलोनीले टूरलाई मिडफील्ड पदमा राखेन, जहाँ उनले आफ्नो क्यारियरको बहुमत खेल्थे र आफूलाई प्रमाणित गरे। Toure को अनुसार, "म उसलाई बोलो (बोलोनी) लाई मेरो स्थान मा खेलन को लागि र उनले उसलाई हँस दिए! उनले अन्य खेलाडीहरूलाई पनि भनेका थिए कि म उनको योजनाको भाग थिएन। "
यया टयरेज ले लुजलो बोलोनी संग गरे
दुर्भाग्यवश, त्यो मौसमको बीचमा मोनाको खराब थियो।
ययाया ट्युरेले बताएका छन् कि उनी खुशी छन् कि मोन्कोले लासजलो बोलोनीलाई बर्खास्त गरेको छ। आइवरी कोस्ट अन्तरराष्ट्रीय बोलोनी संग रिश्तों को सबै भन्दा अधिक सहजता को आनंद थिएन। उनीहरूलाई धन्यबाद थियो रोमानिया ट्राफिकले स्ट्रेड लुई द्वितीयलाई छोडेका छन् र क्यारियर कोच लरेन्टिन ब्यानाइडको अधीन सुधारका लागि आशा गरिरहेका छन्। ययाको अनुसार,
"एक पृष्ठ बदलिएको छ, कोचिंग नौकरी कडा छ, तर मेरो बोलोनीसँग सम्बन्ध थियो।
गिर्डियोलोको साथ आयो
बार्सिलोना मा पेया गारर्डियोला संग यया टाइट्रे
पेप गुर्डियोइलाको साथ उनको मुद्दा आयो जब उनलाई केन्द्रीय ब्याक स्थिति खेल्न बाध्य भयो। यो उनको इच्छाको विरुद्ध थियो।
म्यानचेस्टर शहर मा पीईपी संग छ
ययाय त्रयले पेन्चे गारर्डियोलासँग मचेस्टर सिटीमा लगाइदिए
मचेस्टर सिटीमा पेपको साथ उनको मुद्दा ययाय टाइट्रेको शब्दमा संक्षेपमा सारिएको छ।
"तर म आश्चर्यचकित छु। पीपले व्यक्तित्वसँग खेलाडीहरू चाहँदैनन्। उहाँ मात्र खेलाडीहरू चाहानुहुन्छ जुन तिनको डरलाग्दो हुन्छ र उहाँले के भन्नुहुन्छ। त्यो शहरमा आइपुगेको पहिलो कुरा मेरो थियो र जो हर्टसँग लड्न थालें।
"पीप मेरो विचार मन परेन। मैले बोलेका थिए किनभने मलाई लाग्यो कि पेप मेरो विनाशकारी थियो। दुर्भाग्यवश पेपका लागि, हामी विश्वमा बस्ने छौं जहाँ तपाइँसँग नि: शुल्क भाषणको अधिकार छ। गार्डियोलाले केही खेलहरू जित्छन् र तिनीहरूको राजालाई सोच्छन्। पेलेग्रिनी एक सज्जन र अझ राम्रो थियो "।
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -रस्वादको विजय
उहाँसँग नस्लवादी भीडद्वारा लक्षित हुने एक इतिहास छ। ययाले धेरै पटक उनको इङ्गल्याण्डमा फुटबल खेल्ने माया व्यक्त गरेका छन्, जहाँ नस्लवादी गोलाले काले खेलाडीहरूलाई लक्षित गर्दै एक दुर्लभ घटना हो। उनी पोर्तुगल र मस्कोमा खेलिरहेका बेला सबै भन्दा खराब घटनाहरू देखा परे।
यया त्रय - रिक्षा को एक शिकार
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -'Freekick' कौशल सुधार गर्न प्रशिक्षण पछि रहन्छ
टूर प्रत्येक दिन प्रशिक्षण पछि पछाडि रहन जान्छ। उहाँ शब्दहरूको बलियो विश्वासी हुनुहुन्छ 'अभ्यासले सिद्ध बनाउछ'। विशेष गरी आफ्नो फ्री-लिक प्रविधि सुधार जारी राख्न यया अभ्यास पछि पछि रहन्छ।
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -कान्छो भाइ क्यान्सर लाई लियो
इब्राहिम ओबीलाला टूर नामको तिनका भाइले जून 2014 मा क्यान्सरको मृत्यु भयो। उनी लेबनानको अल-सफा टोलीको लागि एक स्ट्राइकर थिए। यया र तिनका भाइ कोलोले कोलंबिया-इभरी कोस्ट म्याच पछि दुखाइ समाचार दिए।
ययाया ट्युरे- कान्छो भाइ क्यान्सर गर्न को लागी
आफ्नो भाइको मृत्युको मृत्युको कारण, यया टूरले घोषणा गरे कि उसले मन्चेस्टरसँग लामो समय सम्मको साथी खोज्छ। क्लब अधिकारियों संग आरोप लगाउन को बावजूद, यया ले भन्यो कि उनको भाइ को मृत्यु उसलाई पुरस्कार मा ज्यादा ध्यान केंद्रित गर्न को कारण छ। "उहाँ मेरो भाइ हुनुहुन्थ्यो, त्यो फुटबल मनपर्छ। जब उहाँ म्यानचेस्टरमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो उनी खेलिरहेका थिए सबै खेलहरू हेर्दै। खेल गरेपछि, म अस्पतालमा भेट्न आउछु।
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -ट्विटर संभाल र फेसबुक पेज उनको तथ्याङ्क को लागि समर्पित।
यो कुनै चकित छैन त्यसैले यो यया टय्रेको तथ्याङ्कका लागि समर्पित सम्पूर्ण ट्विटर खाता हो। केहि साँचो, अधिक अतिरक्त र सबै धेरै मजाकिया।
यहाँ उत्तम ट्वीट्सको चयन छ।
ययाय त्रयले आफ्ना आँखामा धातुलाई काट्छन्। #ToureFacts
एकमात्र समय यया त्रय गलत थियो जब उनले सोचेका थिए कि उनले गल्ती गरे। #ToureFacts
एप्पल ययाय त्रय एक्सन्युमक्स पेस हरेक पटक उनीहरूको गीत सुने। #ToureFacts
ययाय त्रयले एप्पल आईफोनबाट एप्पलको रस निचोल्न सक्दछ। #ToureFacts
बर्मुडा ट्रान्जिङ्ग एक वर्गको रूपमा प्रयोग गर्थे जब सम्म यया त्रयले एक कुनामा कुच्याए। #ToureFacts
ययाया ट्युरे आईने मा देखिन्छ जब केहि पनि देखिन्छन। त्यहाँ दोस्रो सेकेन्ड टुयरे कहिल्यै हुन सक्दैन। #ToureFacts
14 को उमेर मा, यया Toure एक युवा खेल मा उनको दुवै खुट्टा को तोड दिए। उनी घर फर्किएपछि घर फर्किए। #ToureFacts
युया टुयरे एक पटक युएस यू यू यू यू यू यू यू यू यू यु #ToureFacts
जब ययाय त्रयले तपाईलाई सपनामा पछाडि पुर्याउनुहुन्छ, तपाईं एक चोट संग उठ्नु हुन्छ। #ToureFacts
ययाय त्रयले सुझावहरू छोडेनन्। वेट्रेसहरूले तिनलाई सेवा गर्ने विशेषाधिकारको लागि यया भुक्तानी गर्छन्। #ToureFacts
प्रत्येक खेल अघि ययाय त्रयलाई म्यानेज म्याच अवार्डको उपाधि दिइएको छ। #ToureFacts
ययाय त्रयले बेंच प्रेस रोमीलु लुकुका र डिडीयर डोगाबालाई एक हातले साथ दिए। #ToureFacts
ययाय त्रयले एकपटक एक चट्टानलाई फ्याँकेर एक पक्षीलाई मार्नुभयो। #ToureFacts
ययाय त्रय आफैले टाउकोको टाउको खोल्न सक्षम छ ... उनको टाउकोमा। #ToureFacts
ययाय त्र्रेले एक पटक लेखे, र बैंकले बोलाइयो। #ToureFacts
एक मानिसलाई माछा दिनुहोस् र एक दिनको लागि उसले खानेछ। Yaya Toure एक माछा दिनुहोस् र उहाँले तपाईंलाई पकडाउनुहुनेछ। #ToureFacts
वर्षामा यया टोरेले छाताको खाँचो छैन। वर्षादेवहरू उहाँबाट टाढा बस्नुहुन्छ। #ToureFacts
रोमन साम्राज्य पतन भएन, ययाय त्रयले ट्रयाक गरे। #ToureFacts
येशू पानीमा हिंड्नुभयो किनकि तिनले यया त्रयलाई देखे। #ToureFacts
ययाय त्र्रेले "लुकाउने र खोज्ने" प्ले गर्दैन। "उनीहरूले" लुकेको-र-प्रार्थना-म-डन'-खोज-तपाईँलाई "बजाउँछन्।" #ToureFacts
सबै मौलिक कोम्बट घातक यया टाइट्रे को आधार मा आधारित हुन्छन्। #ToureFacts
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -जन्मदिन विवाद
आईभरी कोस्ट अन्तरराष्ट्रीय एक पटक पछि उनको हलचल पछि उनको एजेन्ट ले भन्यो कि उनले महसूस गरे "निस्क्रिय" क्लब द्वारा, जसले आफ्नो जन्मदिन स्वीकार गर्न असफल भयो।
Yaya Toure सालगिरह विवाद
ययाको एजेन्टको अनुसार,
"क्लबको स्वामीहरूले यो सीजन प्रिमियर लिग जित्न पछि 100kg केक खाए, तर जब तिनीहरू र खेलाडीहरू सबै सँगै थिए, उनीहरूले पनि आफ्नो जन्मदिनमा हात हल्लाए" भनी दिमित्री सेल्कुक भन्नुभयो। "यसले उनीहरूको बारेमा हेरचाह गर्दैनन्।"
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रशंसकहरु द्वारा 'टउर' Chants
धेरै पटकको लागि, 'Toure Song' नाम उनको प्रशंसकहरु द्वारा गाईको रूपमा गाईएको छ। तल हेर्नुहोस् भिडियो।
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - CAF पुरस्कार उच्च र औसत
यो Yaya Toure सबै तरिका हो। आइभोरियन, यया त्रय को अफगानिस्तान को सर्वश्रेष्ठ फुटबलर को नाम को चार (4) साल को लागि लगातार अफ्रीकी फुटबल (सीएएफ) द्वारा नामित गरिएको छ।
दुर्भाग्यवश ययाय त्रयका लागि, 5th अवार्डले आफ्नो बाटोमा जान सकेन। उहाँले एकपटक 2016 को लागि CAF अफ्रिकी फुटबलरको वर्ष अवार्डमा हराउन अचम्म प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो, यो निर्णय "दयालु", "अयोग्य" हो र "अफ्रिकालाई शर्म लाउँछ"।
अक्टोबरमा एक विवादास्पद साक्षात्कारमा उनको आलोचकहरूले टाउरलाई "फैलिएको बुल्स ***" को विपरित आरोप लगाए, र युनाइटेड किंग्डम र तिनको गृह महाद्वीपमा प्रेसको साथ धेरै रन-इन गरेको थियो।
32 वर्षीय इयुरी कोस्ट ले गत वर्षको सुरुमा 1992 पछि राष्ट्र अफ्रिकी कपको पहिलो विजय हासिल गरे र टूर्नामेंटको प्रतिस्पर्धात्मक टोलीमा राखिएको थियो।
तर उसले व्यक्तिगत स्टक्समा बोरुसिया डर्टमन्ड स्ट्राइकर पियरे-एमिलिक एब्याम्यानलाई हरायो - उनीहरूलाई कोच र टेक्निकल निर्देशकहरूको लागि मतदान गरे - र अब निर्णय निर्माहरूमाथि मारेका छन्, "फिफा पनि" पनि यस्तो निष्कर्षमा पुग्ने थिएनन्।
"म धेरै, धेरै निराश हुँ" उनले अफ्रिका फुटलाई भने।
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -लाइभबगर रेजिङ्स
यया टाइट्रे लाइभबगर रेजिङ्स